निजी छोडेर सरकारी स्कूलमा भर्ना हुने विद्यार्थीको लहर बढ्यो • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
पोखरा, १२ बैशाख /पोखरा एक निजीस्कुलमा पढ्ने अनुस्का खराल विन्ध्यवासिनी मा.वि. पोखरा–१६ वाटुलेचौरमा भर्ना हुन आइन्। ६ कक्षा सम्म निजी स्कुलमा पढेकी उनलाई अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा सरकारी विद्यालयमै पढ्न पाउने भएपछि निजि वोर्डिङको पढाई छोडेको उनले वताइन् । यस्तै अर्को निजी विद्यालयमाबाट गौरव नेपाली पनि वोर्डिङको पढाई छोडेर विन्ध्यवासिनी मा.वि. मा पढ्न आएका छन् ।
यी मात्र हैन यो शैक्षिक सत्रमा करिव २ सय जना विद्यार्थी विन्ध्यवासिनी मा.वि. वाटुलेचौरमा भर्ना हुन आएका छन् । जस मध्ये १ सय जना विद्यार्थीहरुले क्लास टेष्टमा पास गरी भर्ना हुन सफल भएका छन् । पोखराका विभिन्न निजीस्कुलमा पढिरहेका करिव १ सय जना विद्यार्थीहरु विन्ध्यवासिनी मा.वि.मा आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद आचार्यले वताए ।
हाल एक हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको विन्ध्यवासिनी मा.वि.मा पढ्न विद्यार्थीहरुको लाम वढेपछि प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी नोट गरेर भर्ना लिनु परेको प्र.अ. आचार्यले वताए । २००४ सालमा पंडित मुक्तिनाथ तिमल्सिनाको विशेष सकृयतामा स्थापित विन्ध्यवासिनी मा.वि.ले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा ठूलो विरासत धानेको स्थानिय वुद्धिजिवी झंकनाथ देवकोटा वताउँछन् ।
समयको माग र अंग्रेजी शिक्षा प्रति आकर्षण वढेपछि विन्ध्यवासिनी मा.वि.ले ९ वर्ष अगाडि देखि अंग्रेजी माध्यमवाट पढाई सुरु गरेको थियो। नेपाली माध्यम वाट पढाउँदा विद्यार्थी घट्दै गएपछि अंग्रेजी माध्यम वाट पढाई सुरु गर्न परेको हो एक शिक्षकले भने। अंग्रेजी माध्यमको पढाई सुरु गरिएपछि वर्षेनी विद्यार्थी वढेको वढ्यै छन्। यहि गतिमा विद्यार्थी वढ्ने हो भने अव भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति थप्नु पर्ने वाध्यता रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रा थापाले वताइन् ।
पोखरामा कार सडकमै पल्टियो, एक जनाको मृत्यु १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
नेपाल भ्रमर्ण वर्षलाई लक्ष्त गर्दै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा थप चारवटा पदमार्ग १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
सिद्धबराह मन्दिरमा १०८ फिटको हनुमान मूर्ति स्थापना गर्न शिलान्यास १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
सृजना कप भलिबलमा छात्रतर्फ राष्ट्रिय मावि र बाराही मावि तथा छात्रातर्फ ताल वाराही र जनप्रिय भिड्ने १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
क्यान इन्फोटेकका सम्पूर्ण स्टल बुकिङ १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
ट्रमाको निर्देशकमा पोखराका डा पौडेल नियुक्त, विपन्नलाई निःशुल्क शल्यक्रियाजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
सृजना कप भलिबलमा छात्रतर्फ क्वाटरफाइनल र छात्रातर्फ सेमीफाइनल समीकरण पूरा १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
पोखरा शिक्षाको हबः उपप्रमुख गुरुङ १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
सागको हिसाब किताब ३ महिनाभित्रै सार्वजनीक हुन्छ- सदस्य सचिब सिलवाल १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाद्धारा राजीनामा १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:४८